Manery ny mpivarotra hialana amin'ny media sosialy ve ny media sosialy? | Martech Zone
Manalavitra ireo mpivarotra an-tserasera ve ny media sosialy?
Alakamisy Febroary 16, 2017 Douglas Karr
Ity dia infographic milaza tsara avy amin'ny Sprout Social izay misy vokany lalina kokoa noho izay mety eken'ny mpivarotra. Antsoina ilay infographic Tranga haino aman-jery sosialy 6 izay handray ny taona 2017 ary mamakivaky ny fantsona media sosialy tsirairay, ny fiovan'ny toetran'ny mpanjifa, ary ny fandrosoan'ny teknolojia toy ny faharanitan-tsaina artifisialy.
Miaraka amin'ny horonan-tsary ilaina, ny teknolojia fanakanana doka, ary ny fitomboan'ny fantsona 1: 1 toa ny Snapchat sy ny mpivarotra dia mila mandinika indray ny doka sy ny dokambarotra fipoahana ataon'izy ireo isan-taona. Ny mpividy dia manana fahefana ankehitriny hitady izay ilainy, rehefa ilainy izany, any amin'izay ilana azy, amin'ny vidiny tadiaviny. Ireo safidy ety ho an'ny orinasa dia manondro ny fampiasam-bola amin'ny traikefan'ny mpanjifany sy ny fananganana fifandraisana mivantana.
Na dia eo amin'ny fifandraisan'ny orinasa sy ny orinasa aza, varotra miorina amin'ny kaonty dia valiny mitondra fiara. Na dia tsy maty aza ny dokam-barotra midadasika, dia tetikady kendrena voafaritra manokana no manomboka mitarika ny dian'ny mpanjifa - fa tsy ny doka voadonoka na aiza na aiza tsy tadiavin'izy ireo.
Trends media sosialy 2017
AI Lensa ho an'ny Facebook sy Instagram - Misy itovizan'ny traikefa an-tsary mialoha mety ho eo amin'ny faravodilanitra Facebook, saingy tsy azoko antoka fa hovahana ireo alika AI amin'izao fotoana izao amin'ny dian'ny haino aman-jery sosialy. Mino aho fa ny fampiasana voalohany dia ny fampifangaroana ny doka amin'ny tsiro amin'ny maso.
Chatbots amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa bebe kokoa - raha toa ka hitombo ny filàna fifandraisana manokana sy 1: 1, soa ihany fa misy ny teknolojia izay hanampy amin'ny fampihenana ireo loharano ilaina mba hahatratrarana vokatra ambonimbony kokoa. Chatbots dia azo ampiasaina hanomezana fampahalalana amin'ny antsipiriany amin'ny fomba firesaka izay tsy mamono ny mpanjifa na orinasa - izany rehetra izany dia mampitombo ny tahan'ny fiovam-po sy manampy ireo mpitsidika.
Mitohy manjaka ny atiny karama - Raha misy zavatra takatry ny mpivarotra dia ny media sosialy manangana tetezana eo anelanelan'ny vokatrao sy ny serivisinao ary ny mpanjifa na orinasa tianao hampidirina eo alohan'izy ireo. Rehefa mihalehibe kokoa ny sehatra media sosialy, fantatrao fa ho lafo kokoa ny tetezana!
Laharam-pahamehana amin'ny Business Features & Analytics - Tsy azoko antoka izany Toetoetra dia marina - mino aho fa ny tombony, ny lanja ary ny traikefa dia ny media sosialy handrisihana ny firotsahana, ny fahazoana, ny fitazonana ary hampiakatra ny sandan'ny fifandraisantsika amin'ireo mpanjifantsika. Ilaina i Analytics noho izany - saingy misafidy traikefa tsotra iray aho fa tsy manampy be dia be amin'ireo fiasa tsy misy dikany.
Mialà amin'ny automation - Somary tsy mino an'io ihany koa aho. Amin'ny taona 2017, ny mpivarotra dia mila ny automatique rehetra zakany mba hahatratrarana vokatra ambonimbony miaraka amin'ny loharano farany kely. Na izany aza, hiady hevitra aho fa tsy maintsy ho fitaovana be pitsiny izay mihaino, mampisaraka, manokana ary maminavina ny firosoana amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Fiantsenana ara-tsosialy sy fividianana Instant - Miaraka amin'ny fahaizana mividy, manome, na mandefa fanomezana mora foana, ny firoboroboana ny atiny ateraky ny mpampiasa dia ho fitomboana hatrany. Hizara lahatsoratra momba izany izahay Stackla tsy ho ela dia tena nahagaga izany, nampitombo ny tahan'ny fiovam-po indraindray 30% ho an'ny vokatra sasany.
Tsy dia misy fisalasalana ny amin'ny fitomboana sy ny haino aman-jery sosialy be pitsiny amin'ny taona 2017. Raha mbola mitolona ny orinasa - 34% amin'ireo orinasa madinidinika ihany no mampiasa media sosialy hifaneraserana sy hifampiresahana amin'ny mpanjifa, efa ho ny ampahatelon'ny mpanjifa no nilaza fa ny fisian'ny marika iray dia ny antony lehibe indrindra hanandramana vokatra na serivisy vaovao. Ary ny 57% -n'ny mpanjifa dia azo inoana kokoa fa hividy amin'ny marika arahin'izy ireo
Tags: 2017 fironanaSary torohayfampielezan-kevitra ara-tsosialyfanarahana sosialyautomatisation media sosialysary amin'ny haino aman-jery sosialyfironana amin'ny haino aman-jery sosialyfironana amin'ny haino aman-jery sosialy 2017fisian'ny fiaraha-moninafivarotana ara-tsosialyfiantsenana ara-tsosialymitsimoka sosialyny fironana
Fironana famolavolana nomerika 8 ho an'ny 2017